विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन उडान तालिका र भाडा दर तय, कुन देशबाट कहिले उडान ? — Imandarmedia.com
विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन उडान तालिका र भाडा दर तय, कुन देशबाट कहिले उडान ?
काठमाडौं। सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्दार गर्नका लागि उडान तालिका र भाडादर निर्धारण गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडानको मिति र भाडा दर तोकेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलायन्ससँगै अब विदेशी जहाजले पनि उडान गर्न पाउने भएका छन् । पहिलो चरणको प्राथमिकतामा परेका ३० देशका २४ हजार १४८ नेपाली स्वदेश फिर्तीका लागि संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तालिका तयार पारेर कोभिड १९ व्यवस्थापन केन्द्र सिसीएमसीलाई बुझाएको छ ।
मन्त्रालयले सीसीएमसीलाई उपलब्ध गराएको तालिका अनुसार जेठ २९ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म पहिलो चरणको उडान तालिका बनेको छ । सरकारले नेपालीहरुकाे उद्दार गर्न स्वदेशी सहित केही विदेशी एयरलाइन्सलाई उडानमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
३० देशबाट नेपालीलाई ल्याउन ६७ वटा उडान हुने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सले २४, हिमालय एयरलाइन्स १९ र विदेशी जहाजदे २४ वटा उडान भर्नेछन् ।
कुन देशबाट कहिले उडान ?
भाडादर कति ?
सरकारले प्राथमिकताको आधारमा नेपाल ल्याउने नेपालीले विभिन्न देशबाट आउँदा आफैले टिकट काट्न पर्नेछ । सरकारले उद्दार गर्नका लागि सूची तय गरेको ३० देशबाट आउनका लागि हुने चार्टर्ड उडानको भाडादर पनि तोकेको छ ।
चार्टड उडानका लागि दूरीअनुसार डलरमा भाडा निर्धारण गरिएको छ। विदेशी एयरलान्सले पनि उक्त भाडादर अनुसारै नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा कम भाडा बंगलादेशका लागि १ सय ६५ डलर तोकिएको छ भने सबैभन्दा बढी लन्डनका लागि १ हजार ३ सय ४० डलर तय गरिएको छ।
त्यस्तै साउदी अरब ५९०, रियाद ६३०, जेद्हा ७७०, जोर्डन ८१५, साइप्रस ८७५, नारिता ९३५, सुडान ९४०, फ्रयाङकफर्ट १२५५, लन्डन १३४०, बांगलादेश १६५, नयाँ दिल्ली २०५, मुम्बइ ३१०, बैंगलोर ३३५, बैंकक ३९०, कम्बोडिया ४००, दुबई ५००, आवुदाबी ५००, ओमन ५१०, क्वाललम्पुर ५२०,दोहा ५४५, हङकङ ५५० डलर तोकिएको छ।